BOLLYWOOD - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
मुम्बई, जुन १५
बलिउडका चम्किला अभिनेता सुशान्त शान्त भएका छन् । आइतबार आफ्नै निवासमा झुण्डिएर सदाकालागि भौतिक संसारबाट विदा लिएका सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम संस्कार पछि उनी सदाकालागि शान्त भएका हुन् । सोमबार मुम्बईको विले पार्लेको सेवा समाज घाटमा उनलाइ अन्तिम विदाइ दिइयो । उनका बुवा कृष्ण कुमार सिंहले मुखाग्नि दिएका थिए । यसका अलावा अन्तिम संस्कारमा उनका दिदी भिनाजु लगायत परिवारका अन्य सदस्यकासाथै नजिकका मित्रहरु सहभागी भएका थिए ।
पंचतत्वमा विलिन भएका सुशांतको मृत्यु साँस रोकिएको कारणले भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको बताइएको छ । उनी आइतबार मुम्बईको वान्द्रास्थित आफ्नै फ्ल्याटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । उनी पछिल्लो ६ महिनादेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको प्रहरीले बताएका छन् । मुम्वई क्राइम ब्रांचले सुशांतको मृत्यु बारे जाँच गरिरहेको छ ।
सुशांतको निधनले एकातिर बलिउडमा शोकको लहर छाएको छ भने अर्कोतिर पून एकपटक बाहिरबाट संघर्ष गरेर आउने अथवा गडफादर नहुने कलाकारहरुसँग हुने भेदभावबारे बहस छेडिएको छ ।
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले सुशांतलाइ आत्महत्या गर्न फिल्म जगतमा हुने गरेको नेपोटिज्म(भाइभतिजावाद)ले उक्साएको आरोप लगाएकी छन् । उनले पून निर्माता निर्देशक करण जौहरलाइ लक्षित गरेर पछिल्लो फिल्म ड्राइभमा सुशांतको रोल नै सीमित पारिदिएको आरोप लगाइन । उनले करणले आफूलाइ पनि उंगली भन्ने फिल्ममा शुरुमा ४५ मिनेटको रोल दिएर १०–१५ मिनेटमा भुमिकमा सिमित गरिदिएको खुलासा गरिन ।
त्यसैगरि सुशांतको निधनपछि प्रख्यात फिल्ममेकर शेखर कपुरले पनि ट्वििट गर्दै कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । ‘तिमी कुन पिडाबाट गुज्रिरहेका थियौं, मैले बुझेको थिए । मलाइ ती मानिसहरुको कहानी पनि थाहा छ जसका कारण तिमी यति नराम्रोसँग टुटेको थियौ र मेरो काँधमा शिर राखेर रोएका थियौं, काश म पछिल्लो ६ महिना तिम्रा वरिपरि नै भएको भए हुन्थ्यो, काश तिमी म नजीक नै आएको भए हुन्थयो । जुन तिमीसँग घटयो त्यो तिम्रो होइन,उनीहरुको कर्म हो ’, शेखरले सुशांतलाइ संझिदै लेखेका छन् ।
शेखर कपुरको महत्वकांक्षी फिल्म पानीको मुख्य भुमिकामा सुशांतले अभिनय गर्ने तय भएको थियो । यशराज फिल्मसको ब्यानरमा बन्ने भनिएको यो फिल्म विभिन्न कारणवश बन्द भयो । पछिल्लो सात वर्ष यही फिल्मका कारण सुशांतले अन्य फिल्म अस्वीकार गरेका थिए । यो फिल्म नबन्ने भएपछि पनि उनी डिप्रेसनमा गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरि फिल्ममेकर मुकेश भट्टले पनि उनले सुशांतलाइ पछिल्लो समय भेटदा उनी सामान्य नरहेको खुलासा गरेका छन् । डेढ वर्ष अघि सडक २ को कास्टिंगको क्रममा मिटिंगको दौरान उनले सुशांतसँग भएको कुराकानी संझदै सुशांतलाइ एक विचलित व्यक्तिको रुपमा पाएको बताए ।
३४ वर्षका सुशांतको पछिल्लो उत्कृष्ट फिल्म छिचोरे निकै मन पराइएको थियो । फिल्ममा असफल हुँदा आत्महत्या सही समाधान नहुने संदेश दिएको यो रिल लाइफका मुख्य अभिनेताले नै रियल लाइफमा संदेश मनन गर्न सकेनन । तर सोमबार पंचतत्वमा विलिन भइसकेका सुशांतले एउटा प्रश्न छोडेर गए, उनी जीवनसँग हारे तर किन ?
अलविदा सुशान्त !!!
भारतीय अभिनेता ऋषि कपुरको निधन
नयाँ दिल्ली,अप्रिल ३०
बलिउडका दिग्गज अभिनेता ऋषि कपुरको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मुम्बईको एचएन रिलायंस फाउन्डेसन अस्पतालमा निधन भएको हो ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुलाइ उनका भाई रणधीर कपुरले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि ऋषिलाइ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको रणधीरले बताएका थिए । यस अघि फरबरीमा पनि ऋषिलाइ अस्पताल भर्ति गरिएको थियो ।
अभिनेता राजकपुरका माहिला छोरा ऋषिले बालकालकारको रुपमा ‘श्री ४२०’ र मेरा नाम जोकर चलचित्रबाट अभिनय शुरु गरेका थिए । सन् १९७३मा खेलेको ‘बाबी’ चलचित्रबाट उनी रातारात स्टार बनेका थिए ।
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले उनको निधनको खबर पहिलो पटक टिविट गर्दै सार्वजानिक गरेका थिए । सामाजिक संजालमा सक्रिय रहने ऋषिले अप्रिल २ पछि कुनै पनि टिविट गरेका थिएनन।
रतन टाटाको प्रेमकथाः अविवाहित छन भारतीय उद्योगपति रतन टाटा , किन हुन सकेन विवाह ?
१४ फरबरी २०२०
सन् १९६०को शुरुतिरको कुरा हो । लस एंजिलिसमा कलेजको पढाइ पुरा गरेर रतन टाटा एउटा आर्किटेक्चर फर्ममा जागीर गर्न लागे । उनीसँग आफ्नो गाडी थियो र उनी आफ्नो जागीर इन्जोय गरिरहेका थिए । त्यतिबेला नै उनी प्रेममा परे ।
‘म कसैसँग प्रेम गर्न थाले, लगभग विवाह गर्ने पक्का भइसकेको थियो । त्यही समय मेरी हजुरआमा बिरामी पर्नुभयो, मेरी हजुरआमा पछिल्लो सात वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो । मैले केहि समयकालागि भारत फर्किने निर्णय गरे । मलाइ विश्वास थियो, उनी पनि म सँगै भारत आउँछिन । तर १९६२मा भारत र चीन लडाईंका कारण उनको मातापिता भारत पठाउन तयार भएनन र हामी छुट्टियौं,’रतन टाटाले हयुमन्स अप बम्बेको फेसबुक र इन्स्टाग्राम पेजमा आफनो प्रेमकथा साझा गरेका छन् । त्यसपछि उनी आफ्नो कारोबारमा व्यस्त भए र अविवाहित नै रहे ।
उनले आफ्नो वाल्यकालका संझना समेत सो पेजमा साझा गरेका छन् । उनले त्यो समय निकै राम्रो रहेको भनेका छन् । उनले लेखेका छन्, मेरो बाल्यकाल निकै खुशहाल थियो । तर जब मेरो भाइ जिमी र म बढदैथ्यौं, हाम्रो आमा बाबुबीचको तलाकको तितो अनुभव गरयौं । जुन आजको समय जस्तै त्यतिबेला पनि सामान्य थिएन । सन् १९४६मा रतन टाटा १० वर्षको हुँदा उनका आमा बाबु अलग भएका थिए ।
उनकी आमा सुनीले दोश्रो पटक विवाह गर्दा स्कुलमा उनका साथीहरुले कुरा काटथे । त्यो मुश्किल समयमा उनकी हजुरआमा नवाजबाई सेठ टाटाले दुइ भाइलाइ हुर्काएकी थिइन । ‘उहाँले नै हामीलाइ आफ्नो आत्मसम्मानलाइ जोगाएर राख्न सिकाउनुभएको थियो,त्यो मूल्य र मान्यता आज पनि म सँगै छ,’ टाटाले लेखेका छन् । सामाजिक संजालमा सक्रिय रतन टाटाको यो पोष्ट भाइरल भएको छ ।
भारतका गिनेचुनेका उद्योगपती मध्ये एक रतन टाटा टाटा समुहका अध्यक्ष हुन । ८२ वर्षीय टाटाको कम्पनीको मुख्य कार्यालय मुम्बइमा रहेको छ । यो समुहले विश्वका ६ महाद्धिपका एक सय बढि मुलुकमा आफनो व्यवसाय बिस्तार गरेको छ ।
सन् २०१८–१९मा समग्र टाटा कम्पनीहरुको आय ७ लाख ९२ हजार ७सय १० करोड भारतीय रुपैया रहेको थियो । कम्पनीले ७ लाख २० हजार बढिलाइ रोजगारी दिएको छ । सन् २०१९ मार्च सम्ममा कम्पनीको बजार पूँजीकरण ११ लाख १० हजार ३०८ करोड भारतीय रुपैया रहेको थियो । कम्पनीको इक्विटि शेयर पूजीको ६६ प्रतिशत हिस्सा परोपकारी कोषको रुपमा राखिएको छ,जसले शिक्षा,स्वास्थ्य,जीवनयापनकालागि कला तथा संस्कृतिको जर्गेनाकालागि खर्च गरिरहेको छ ।
टाटा समुह अन्तर्गतको टाटा सन्स होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत टाटा मोटर्स,टाटा स्टिल,टाटा केमिकल्स,टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस,टाटा पावर, इन्डियन होटल्स,टाइटन,टाटा क्यापिटल्स,टाटा कम्यूनिकेसन्स लगायतका कम्पनी रहेका छन् ।
सलमानको नयाँ चलचित्र कवी इद कवी दीवाली
सलमान खानले आफ्नो नयाँ चलचित्र घोषणा गरेका छन्। सन् २०२१ को इदमा प्रर्दशनमा आउने यो चलचित्रको नाम कवी इद कवी दीवाली रहने खानले ट्विट गर्दै जानकारी दिएका हुन्।
साजिद नाडियावालको निर्माण रहने उक्त चलचित्रलाई फहराद समजीले निर्देशन गर्ने अभिनेता खानले जानकारी दिएका छन्। यसअघि द डन्टरटेन्मेट र हाउसफुल ४ निर्देशन गरेको समजीले सलमान खानलाई पहिलो पटक निर्देशन गर्न लागेका हुन्।
हाल प्रभुदेवा निर्देशित चलचित्र राधेको सुटिङमा सलमान खान व्यस्त रहेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीसँगको तस्वीर साझा गर्दै आशा भोंसलेले भनिन….
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेट पछि तस्वीर साझा गर्दै भारतकी प्रख्यात गायिका आशा भोंसलेले आफूलाइ राष्ट्रपति भवनमा भेट दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार भएको भेट पछि आफ्नो आधिकारिक टिविटर मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीसँगको तस्वीर साझा गर्दै यस्तो लेखेकि छन् ।
Thank you to President Bidhya Devi Bhandari of Nepal for hosting me at the Rashtrapati Bhavan, Kathmandu, Nepal pic.twitter.com/BYkOwPOeiI
— ashabhosle (@ashabhosle) December 27, 2019
सो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले भोसले नेपाली संगीत उद्योगमा पुरयाएको उल्लेखनिय योगदानको सराहना गरेको राष्ट्रपतिलाइ उद्धृत गर्दै साधना कला केन्द्रका संस्थापक निर्देशक मिलन मोक्तानले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारी भोसलेको गीतबाट प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ, मोक्तानले भने । यो भेटमा नेपालको समकालिन परिदृश्यको बारेमा समेत कुराकानी भएको मोक्तानले बताए ।
मोक्तानका अनुसार ८० वर्षीय गायिकाले राष्ट्रपतिा भण्डारी समक्ष आफूलाइ नेपालमा गरिएको स्वागतले निकै खुशी भएको भावना साझा गरेकी थिइन । राष्ट्रपतिसँग काठमाडौंको विमानस्थलमा उनलाइ गरिएको पारम्परिक स्वागतले विशेष खुशी भएको भोसलेको भनाइ उद्धृत गर्दै मोक्तानले भने ।
साधना कलाकेन्द्रको निमन्त्रणमा वुधबार काठमाडौं पुगेकी भोसलले शनिबार एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा उनलाइ नेपालका ३५ कलाकारहरुले साथ दिनेछन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँग भारतीय गायिका आशा भोंसलेको भेट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतीय प्रख्यात गायिका आशा भोंसलेले भेट गरेकी छन् । नेपालमा एकल साँगीतिक प्रस्तुतिकालागि साधना कला केन्द्रको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएकी भोंसलेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेकी हुन् ।
शनिबार सोल्टी होटलमा आयोजना गर्न लागिएको एकल सांगीतिक कार्यक्रम उनको यो यात्राको मुख्य कार्यक्रम रहेको छ । शनिबार हुने कार्यक्रममा उनलाइ नेपालका वरिष्ठ गायक,संगीतकारहरुले साथ दिनेछन ।
बुधबार साँझ एयर इन्डियाको विमानबाट काठमाडौं आएकी भोसलेले रेडियो नेपालको कार्यालय समेत अवलोकन गरेकी थिइन् । शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कला केन्द्रको आयोजनामा भएको रन्जीत गजमेरको एकल साँगीतिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएकी आशाले कार्यक्रममा गजमेरको संगीतमा गाएका गीत प्रस्तुत गरिन ।
भोंसलेले गजमेरको संगीतमा झझल्को लिएर आएछ सावन, साउने झरीमा, नयाँ नयाँ सजाऔँ है संसार, के सोचेँ मैले के भयो लगायत अन्य ६० भन्दा बढी व्यवसायिक नेपाली चलचित्रहरुका गीतमा आफ्नो आवाज दिएकी छन् ।
यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइतीघर, म प्यार बेचिदिन्छु, गैरीखेतको शिरै हान्यो, मोहनी लाग्ला है, झझल्को लिएर आएछ सावन, साउने झरीमा, नयाँ नयाँ सजाऔँ है संसार, के सोचेँ मैले के भयो अहिले, किन बढ्दै छ ढुकढुकी मुटुको, पहाडको माथिमाथि, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा, टाढा भइ नजाऊ कहिल्यै लगायत चर्चित नेपाली गीत गाएकी छिन् ।
६६ औं राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कारमा अंधाधुन–उरीको बोलबाला, आयुष्मान र विक्कि उत्कृष्ट अभिनेता
यस वर्षको ६६ औं राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कारमा ‘अंधाधुन’, ‘पदमावत’, ‘बधाई हो’, ‘उरीःदि सर्जिकल स्ट्राइक’को बोलबाल रहयो । सोमबार नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा सम्पन्न अवार्ड समारोहमा ‘अंधाधुन’ उत्कृष्ट सिनेमा घोषित भयो ।
‘अंधाधुन’ चलचित्रमा उत्कृष्ट अभिनयकालागि अभिनेता आयुष्मान खुरानालाइ उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार प्रदान गरियो । खुराना पहिलो पटक राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन् । उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडुले बिजेताहरुलाइ सम्मानित गरेका थिए ।
त्यसैगरि अर्का उम्दा अभिनेता विक्कि कौशललाइ पनि उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार प्रदान गरियो । उरीःदि सर्जिकल स्ट्राइकको उत्कृष्ट अभिनयकालागि कौशललाइ यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।
उरीका निर्देशक आदित्य धर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तथा शास्वत सचदेवलाइ उत्कृष्ट संगीत निर्देशक(पाश्र्वसंगीत), निर्देशक अमित शर्माको फिल्म बधाई होलाइ उत्कृष्ट मनोरंजक फिल्मकालागि राष्ट्रिय पुरस्कार दिइयो । प्रख्यात फिल्म निर्माता संजयलीला भंसालीले निर्माण गरेको पद्मावतलाइ उत्कृष्ट संगीत निर्देशन र कोरियोग्राफीकालागि तथा अभिनेता अक्षय कुमारलाइ पैडम्यान फिल्मकालागि सम्मानित गरियो ।
भारतीय सिनेमा जगतमा उत्कृष्ट र अमुल्य योगदानकालागि प्रदान गरिने राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमाको सबैभन्दा विशिष्ट अवार्ड मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष विभिन्न भारतीय भाषामा निर्माण भएका फिल्मकालागि राष्ट्रिय पुरस्कार घोषणा गरिन्छ । यस अन्तर्गत उत्कृष्ट फिल्म , उत्कृष्ट निर्देशक , उत्कृष्ट प्रोडक्सन, सामाजिक संदेश , गायक , गीत तथा गीतकार, संगीत,संगीतकार लगायतका विधामा पुरस्कार घोषणा गरिन्छ । जस अन्तर्गत फिल्म विधामा ३१ र नान फिचर फिल्म विधामा २३ अवार्ड दिइन्छ ।
यो समारोहमा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाइ दादासाहेब फाल्के अवार्डबाट सम्मानित गर्ने घोषणा गरियो । तर अस्वस्थताका कारण बच्चन समारोहमा उपस्थित हुन सकेनन् । उनले आफनो आधिकारिक ट्वििटर मार्फत ज्वरो आएको कारण अवार्ड ग्रहण गर्न उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी साझा गरेका थिए । दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा उद्योगको सबैभन्दा उत्कृष्ट अवार्ड हो ।